N'ogbe Wuru Lawn maka Croque 15mm Manufacturer na Supplier | Jieyuanda
Ahịrị wuru maka Croque 15mm
Arti turik maka bọl / ebe bọọlụ 50mm
Soft green turf maka odida obodo 25mm
Wuru turf maka bọl / bọl bọl 40mm
Popular Design maka 20mm Landscape Ezie - Soft gree ...
OEM / ODM China High Quality Sịntetik Ezie - Artifi ...
Discountable price Natural achọ wuru Ezie ...
Ikwu okwu banyere ahihia ahihia, ihe mbu ichoro bu ahihia ndu di n’akuku osimiri. Umu ahihia ndi mara mma mara mma nke oge opupu ihe ubi na udu mmiri, na agba di ndu, ma ha gha akpọnwu na udu nmiri na udu mmiri.
Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ onye ọ bụla nwere ike ịhụ ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ n'oge oyi. Gịnị kpatara nke ahụ? N'ezie, ahịhịa ndị a nwere ike idebe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'afọ niile abụghị ezigbo ahịhịa, mana ahịhịa ahịhịa amamịghe nke m ga-ewebata gị taa.
Na ọkwa ọhụrụ nke mba, a na-eke turf na-ekewa na turf na egwuregwu ntụrụndụ, yana turf ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na enweghị nkwupụta na ụkpụrụ doro anya na nkọwa nke ụdị ọ bụla, a na-enyekwa nkọwa dị mfe.
Egwuregwu turf: turf artificial nke kwesịrị ekwesị maka ebe egwuregwu, dịka ụlọ akwụkwọ elementrị, ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ụlọ akwụkwọ sekọndrị, mahadum, ámá egwuregwu, ogige bọọlụ, ụlọ ịgba tennis na egwuregwu ndị ọzọ na-akụzi egwuregwu na ebe egwuregwu ọkachamara.
Ntụrụndụ Lawn: wuru ahịhịa kwesịrị ekwesị maka ndị na-abụghị egwuregwu venues, ụlọ akwụkwọ ọta akara, ọfịs gburugburu ebe obibi, mma gburugburu ebe obibi na ndị ọzọ na venues.
Ala ahịhịa ahịhịa: Ogige artificial nke kwesịrị ekwesị maka ebe nlele, dịka ogige, obodo, mgbidi na ebe ndị ọzọ.
Mgbe ogologo oge nke mmepe na omume, ụlọ ọrụ turf ụlọ ọrụ dị njikere karịa subdivide artificial turf dị ka njikọta nke ọrụ na saịtị.
Lawn egwuregwu: ahịhịa maka ụlọ akwụkwọ praịmarị na nke sekọndrị, ahịhịa maka ogige bọọlụ, ahịhịa maka ogige basketball, ahịhịa maka ogige tennis, wdg.
Ala ahịhịa ahịhịa: ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ n'èzí, ahịhịa ime ụlọ ime ụlọ, ahịhịa eji achọ mma, ahịhịa ala, wdg.
Ogige bọlbụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ mgbe niile ma mgbanwe ihu igwe anaghị emetụta ya. Ọ na-adị ndụ mgbe niile n'afọ, gbakwunyere ebe mara mma mara mma nke mejupụtara uhie uhie. Imirikiti nke ahịhịa nkịtị ga-akpọnwụ n'oge oyi na mgbago ugwu mba m, ọ gaghị eto ruo mgbe oge opupu ihe ubi na-esote, ọ gaghị etokwa mgbe mmezi ogologo oge. N'ụzọ dị otú a, n'ime ogologo oge oyi, ámá egwuregwu ahụ niile bụ mpempe akwụkwọ na-acha edo edo, ọbụlagodi iberibe ala nkịtị, ọ bụrụ na enweghị ike ịkụgharị ya n'oge, ọ ga-emetụtakwa mmetụta ọhụụ nke ama egwuregwu niile.
Lawns maka Croquet
Maka croquet, turf ga-adị mkpa, sie ike ma sie ike. Site na mma ya, o kwesịrị ịbịaru ala ahịhịa golf kacha mkpa. Nlekọta ahihia bụ otu ihe ahụ na ahịhịa golf. Agbanyeghị, ekwesiri iburu n'uche na n'oge oge oyi anaghị eduzi egwuregwu na ya. Ya mere, n'oge oyi na England ha na-emepu akụkụ nke sod, harrowing ma rụọ ọrụ iji weghachite mkpuchi turf. N'adịghị ka ọdọ mmiri golf, ọ dịghị elu na-adịghị edozi, nke na-ewepụ ọtụtụ nsogbu metụtara omume nke ịkpụ ntutu, mkpuchi ala ụwa na ịgbara mmiri.
Nke gara aga: Ahịrị wuru maka bọọlụ / bọọlụ / ogige egwuregwu egwuregwu 50mm
Egwuregwu American Football
Ru Egwuregwu Egwuregwu
Artificial Turf Maka Football
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Football
Ngwá Ọrụ Egwuregwu Egwuregwu
Egwuregwu Football Turf
Football Egwurugwu Grass
Ru ala maka obere-bọọlụ ebe nke nwa ...
Wuru Lawn maka football / bọl / multifunct ...
Ru ala maka Croquet 10mm
Wuru turf na ọtụtụ-eji, ị ...
Uniquezọ 4 pụrụ iche iji ahịhịa artificial